घोराही खानेपानी चुनावले देखाएको दृश्य - जागरण अनलाइन
घोराही खानेपानी चुनावले देखाएको दृश्य
२०७५ फाल्गुन ५, आईतवार १४:३६
दीपेन्द्र घर्ति (प्रभाकर)
घोराही खानेपानीको चुनाव भर्खर सम्पन्न भएको छ। चुनावको विषयमा टिकाटिप्पणी केही समय चल्ने छा“टका“ट देखिएको छ। चुनावमा जितहार हुनु स्वाभाविकहो। तर घोराही खानेपानीको चुनावले विशेष अर्थ राख्ने परिस्थिति पैदा भएको छ। त्यो कुन अर्थमा भने पहिलोे देवीबहादुर डिसीले निरन्तर छैठौं कार्यकालसम्म अध्यक्षमा जित्न सफल हुनु, दोस्रो, प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा खडा भएको पक्ष देशमा दुई तिहाइको बलियोपन ह“ुदाह“ुदै पनि उल्टो झण्डै दुई तिहाइको मतान्तरले पराजित हुनु।
घोराही खानेपानीमा देवीबहादुर डिसीलाई विगत २०५४ सालदेखि नै अध्यक्ष पदमा विरजमान हुन सक्ने बलियो क्षमता कसरी पैदा भएको छ भन्ने विषयले सबैलाई कौतुहलता जगाइरहेको छ। यसरी लामो समयसम्म खानेपानीमा ग्राहकको मन जित्ने खुबी के छ ? बहुसंख्याको रोजाइमा देवीबहादुर किन र कसरी परेका छन् ? उनले के जादू गरी खानेपानी चलाएका छन् ? अथवा त्यसका लागि के लगानी गरेका छन् ? त्यस्तो गहिरो जरा गाड्न सफल भएका छन् भन्ने जिज्ञासा सबैमा जागेको छ। हुन त उनका विषयमा नकरात्मक वा कुरा काट्ने र धारेहात लगाउने पनि नभएका त हैनन् होला तर पनि त्यो यति बेला नगन्य नै भएको छ वा ओझेलमा परेको छ। जसले गर्दा उनको विजयले सबै कमजोरी पक्षहरु पनि विलाएर गएका छन । र मानांै उनी यति बेला कुनै कमजोरी नभएका गुणैगुणले भरिएका मानव मात्र हैन भगवान नै हुन क्यारे भन्ने जस्तो गरी कुरा गर्ने गरिन थालेको छ।
खैर यो विषयलाई छोडौं, तर सत्य कुरा के मान्नैपर्दछ भने ग्राहकहरुको मन एकहदसम्म जित्न सफल भएको कुरा त तथ्यले पुष्टि गरिसक्यो। त्यस कारण अब देवीबहादुरको विषयमा चर्चा परिचर्चा, टिकाटिप्पणी अथवा डाहा गर्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। बरु देवीबहादुरले कस्तो व्यवहार गरेर ग्राहकको मन जित्न सफल भएका हुन् त भन्ने कुरा उनीबाट सिक्न आवश्यक छ। र, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने भयो । किनकि देवीबहादुर घोराही खानेपानी का एउटा जीवित पाठ नै बनिसके । उनलाई पछि पार्नलाई त्यो भन्दा राम्रो बन्नुको विकल्प नै रहेन । नत्र जित्न संभव नै भएन र अब उनी अध्यक्ष पदको दाबी गर्दासम्म अरु जो कोही माइकलालको पनि भाउ नचल्ने देखियो ।
उनलाई जित्ने कुरा असम्भव जस्तो भएको कुरा विगतले देखाइसक्यो। उनले आफैले मैदान खाली गरिदिए मात्र अरुको सम्भावना रहने स्थिति बन्यो।
पार्टीको समर्थन हुदा होस् वा बागी उमेदवार बन्दासमेत उनले नहार्ने भएका छन्। यसको अर्थ ग्राहकको हर कठिनाइमा साथ दिन सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति र छिटोछरिटो सेवा प्रवाह गर्ने उनको आनीबानी, शैली, व्यवहार नै यसको मुख्य कडी हो कि भन्ने सबैको अड्कल रहने गरेको देखिन्छ।
दोस्रो विषय, यतिबेला देशमा वामपन्थीहरुको दुई तिहाई बहुमतको बाहुल्यताले सरकार चलिरहेको बेला सबैतिर वामपन्थीहरुको हाइहाइ
चलिरहेको छ। लाग्छ अब वामपन्थीइतरहरुको यो देशमा कुनै गुञ्जायस छैन कि जस्तो गरी हाइफाइ चलिरहेको अवस्थामा सबैको अड्कल अबका दिनहरुमा हुने सबैजसो चुनावमा वामपन्थीहरुकै दुईतिहाई हुन्छ भन्ने परेको यो सन्दर्भमा राप्तीको केन्द्र दाङ अनि दाङको केन्द्र घोराहीमा भएको यो खानेपानीको चुनावमा वामपन्थीको यो निर्लज्जतापूर्ण पराजितले ठूलो परिमाणमा नकारात्मक अर्थ लाग्ने गरी विषय उजागर भएको छ। यति मात्र हैन, यसले देवीबहादुर डिसीलाई सपोर्ट गर्ने कांग्रेसको मनोवल उच्च बन्ने र राष्ट्रिय रुपमा गिरेको मनोवलको साख समेत बचाएको भान हुने गरेको छ भने वामपन्थीहरुको लागि यो चुनावले निराशाको फेरो लगाएको जस्तो स्थिति पैदा भएको छ। यति मात्र हैन, यसले दुई तिहाइभित्रको खोक्रोपन उदाङ्गो भएको छ। अनि वामपन्थीको अहिलेको बाहुल्यतालाई जनताले भित्रैदेखि रुचाउन नसकेको हो कि भन्ने अड्कल समेत गर्ने स्थितिमा पु¥याइदिएको छ।
जेहोस् यो चुनाव एउटा नियमित क्रिया वा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो र थियो। फेरि पनि यस पटकको चुनाव विशेषरुपले अथ्र्याउने गरी सम्पन्न भएको छ। यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने शिक्षाको रुपमा उजागर भएको छ। विजय पक्षले पनि धेरै हौसिन आवश्यक छैन भने त्यस्तै पराजित पक्षले पनि कहीं कतै भइरहेका कमीकमजोरी, घमण्ड र अहंपनलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने सूचांक गरेको छ।
घोराही खानेपानीको चुनावले देवीबहँदुरको विजयले व्यक्तिगतरुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाप्रतिको दायित्वलाई बुझेर लाग्ने कुरा र सामाजिक संघसंस्थामा अपनाउनुपर्ने व्यवहारको पाठ सिकाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रियरुपमा चलेको प्रभावले सबै क्षेत्र वा ठाउ“हरुमा सोही अनुपातमा प्रभाव पर्न नसक्ने भएकाले हरेक स्थान, क्षेत्रहरुमा विशेषरुपले सावधानी अपनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको छ। जेहोस् चुनावले जे जस्तो माहोल सिर्जना गरे तापनि ग्राहकले पानी सरल, सुलभ, सुरक्षित र पुग्दो किसिमले उपयोग गर्न पाउन् सोही प्रयोजनका लागि देवीबहादुर डिसीको तनमन पूर्णरुपमा लागोस् । कुनै पार्टी विशेषको नेता वा सौतेनीको व्यवहारले ग्राहक आजित नबनून्। विजय देवीबहादुर डिसीको टीम र घोराही खानेपानीलाई कार्य सफलताको शुभकामना।